VONONA TANTERAKA NY VONDRONA MAPAR : « Tsy matahotra fifidianana izahay »
Vonona tanteraka ny handray anjara mavitrika amin’ny fifidianana rehetra izay misy eto amin’ny Firenena ny vondrona Mapar ary nilaza izy ireo fa « tsy matahotra fifidianana ». 12 octobre 2017
Nanamafy hatrany ireo olom-boafidy tao anatin’ity vondrona mpanao politika ity fa tsy eken’izy ireo hatramin’ny farany izay mety ho endrika fanodinkodinana ataon’ny fitondram-panjakana, ka tsy hahatanteraka ny fifidianana izay hotanterahina amin’ny taona 2018. Ny vondrona Mapar izay mitsipaka marin-drano ihany koa ny fikasan’ny mpitondra hanova sy hikitika ny lalàmpanorenana.
Hentitra ny Solombavambahoaka Mapar raha nilaza fa « fa raha mbola mikiribiby hanova an’io lalàmpanorenana io ny fitondram- panjakana dia handresy eto Madagasikara amin’izay ny hatao hoe ‘tsia’ ». Tokana ny fomba fijery raha ho an’ity vondrona mpanao politika ity dia efa tsy misy ianteheran’ny vahoaka intsony izao fitondrana mijoro ankehitriny izao. Nambaran’ny Solombavam- bahoaka Mapar hatrany fa tsy manana finiavana intsony ny hijery izay tena maharary ny vahoala ny fitondram-panjakana ankehitriny ary tsy mijery intsony ihany koa ny sosialim-bahoaka izay mipaka eny anivon’ny Fokontany.
Iaraha-mahalala fa anisany nandray anjara feno tamin’ny ady atao amin’ny pesta ireo Solombavambahoaka avy amin’ny Mapar. Fokontany maro tao anatina boriborintany samihafa teto an-drenivohitra no nisitraka izany.